“Lionel Messi, Cristiano Iyo Neymar Midkoodna Lama
By axadle Last updated May 18, 2020
Difaacii hore ee xulka qaranka Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Roberto Carlos ayaa rumaysan in Ronaldo Nazario uu ka sarreeyey Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo aan lala barbar-dhigi karaynin.
Carlos waxa uu sheegay in aanu waligii soo bixi doonin Ronaldo kale, waxaanu ku dooday in saddexda AxadleTM ee waqtigan loogu hadal-haynta badan yahay ee Messi, Cristiano iyo Neymar aanu midkoodna gaadhi karaynin R9.
Kaddib markii uu xili ciyaareedkii 1996-97 dunida isku baray wacdaro uu ka dhigay Barcelona, Ronaldo waxa intii ka dambaysay xirfaddiisa lugta qabtay dhaawacyo jilibka ah oo kusoo noqnoqday oo u diiday inuu si fiican u ciyaari karo muddo shan sannadood ah.
Inter Milan oo uu uga wareegay Barcelona xili ciyaareedkaas kaddib, waxa uu safkeeda ka baxay badhtamaha sannadkii 1999 oo uu dhaawac jabniin ah gaadhay, waxaanu ugu dambayntii si buuxda ugu soo laabtay dhaawacyadaas sannadkii 2002 oo uu dalkiisa Brazil kala qayb-galay Koobkii Adduunka ee lagu qabtay Japan iyo South Korea, kaas oo dhamaadkiisiina uu Real Madrid ka degay.
Santiago Bernabeu oo uu shan sannadood ka ciyaaray, waxay is garab taagnaayeen Roberto Carlos oo marka laga yimaaddo muddada ay Real Madrid wada joogeen ay ahaayeen saaxiibbo dalkooda u wada halgama.
Roberto Carlos ayaa waraysi uu bixiyey waxa wax lagaga weydiiyey waxa uu Ronaldo kaga duwanaa xiddigaha waqtigan jooga garoomada, waxaanu ku jawaabay: “Ronaldo tababarka ayuu u istaagi jiray. Waxa uu ahaa kan ugu wanaagsan. Waligeen ma heli doono Ronaldo ‘Fenomeno’ kale.
“Xattaa Neymar, Criano ama Messi, Ronaldo wuu ka duwanaa.
“Waxay ila tahay in jiilkayagii ay adkayd in goolal la dhaliyo. Wuxuu ahaa mid jidhka aad loo isticmaali jiray, weeraryaahannada aan la ilaalin jiray, laakiin Ronaldo wuxuu samayn karayay wax walba.”
Ronaldo iyo Carlos oo ku faraxsan guushii Koobka Adduunka ee 2002, waxay xili ciyaareedkii 2002-03 ku wada bilowdeen Real Madrid, waxaanu difaacan bidix ee hore xasuusan yahay kulankii ugu horreeyey ee Ronaldo uu u ciyaaray Los Blancos isaga oo ka garab safnaa Luis Figo iyo Zinedine Zidane.
Ciyaartan oo Real Madrid ay la dheeshay Alaves, waxa uu Carlos ka yidhi: “Waan garanayey sida uu wax aan la rumaysan karin u noqonayo marka uu yimaaddo, laakiin dad badan oo Madrid joogay may u garanayn. Dad badan ayuu ka yaabiyey. Waxaan xasuustaa sidii ay 80,000 qof oo garoonka joogay aadka ugu faraxsanaayeen ee uu uga yaabiyey.”
Chelsea Oo Dalabkii Labaad Ka Gubisay Bartilmaameedka Man